Vehivavy malaza indrindra 50 eto amin'izao tontolo izao (lisitra 2020) - Fialam-Boly
Eto amin'izao tontolo izao ankehitriny dia azontsika antoka fa zavatra iray izay tsy ambany noho ny lehilahy ny vehivavy. Na ho an'ny fialamboly, na amin'ny resaka politika, na amin'ny sehatra hafa, dia mitovy amin'ny lehilahy izy ireo. Tao anatin'izay taona vitsy lasa izay, nahita vehivavy maro isika izay nanjary nalaza sy nalaza ary nanao izany ho an'ny tenany aza tamin'ny sehatra maro samihafa tamin'ny fanaovana asa mafy sy fanoloran-tena.
Noho ny asa mafy nataony dia nanjary nahomby izy ireo izay nahatonga azy ireo ho malaza manerantany.
Vehivavy malaza indrindra 50 amin'ny taona 2020:
Ka amin'ity lahatsoratra ity dia hanome anarana vehivavy malaza 50 toy izany isika izay nalaza erak'izao tontolo izao.
Oprah Winfrey dia tokony ho lohalaharana amin'ny lisitra rehefa miresaka momba ny vehivavy malaza indrindra eran'izao tontolo izao isika. Izy dia olo-malaza amerikana, mpilalao sarimihetsika, vatofantsika, mpampiantrano resaka amin'ny fahitalavitra, ary mpamokatra ihany koa. Ramatoa manan-talenta izy izay manana ny seho firesaka nataony Ny fampisehoana Oprah Winfrey , izay nanomboka tamin'ny 1986 ka hatramin'ny 2011.
Laharana faha-9 izy tamin'ny lisitr'ireo vehivavy manan-kery indrindra avy amin'i Forbes. Tsy izany ihany, fa izy aza dia nisaina ho vehivavy malaza matanjaka indrindra eran'izao tontolo izao izay mahavariana.
Cher dia endrika malaza be eo amin'ny tontolon'ny mozika pop. Izy aza dia mpilalao sarimihetsika cum poeta ary mpanatontosa. Ny hirany malaza voalohany dia I Got You, Babe. Noporofoiny fa mpampiantrano amin'ny fahitalavitra sy soloista izy taty aoriana. Nahazo Grammy, Oscar, Emmy Award iray ary Globes Golden 3 aza izy.
Britney Spears dia iray amin'ireo kintana malaza indrindra tamin'ny taona 1990. Tian'izao tontolo izao izy noho ny hira mihira aminy. Ny sasany amin'ireo hirany malaza indrindra dia ny Baby One More Time izay avy amin'ny rakikirany voalohany sy Oops !. Hira I Did It Again izay namidy kopia 26 tapitrisa manerantany. Mety tsy ho eo amin'ny famirapiratana intsony izy. Saingy, mbola tian'ireo mpankafy azy izy.
Lana Del Ray dia mpamoron-kira ary mpihira malaza. Mpanoratra tononkalo manan-talenta izy ka nahazo fankasitrahana betsaka tamin'ny asany sy ireo mpitsikera ny mozikany. Heverina ho iray amin'ireo endrika manandanja indrindra amin'ny kolotsaina pop amerikana izy. Na dia avy amin'ny 80 andro aza izy dia mbola nahazo ny lokony ihany.
Fantatry ny rehetra fa i Rihanna ilay zazavavy elo dia nampiala anay tamin'ny mozika pop nandritra ny taona maro. Nanomboka tamin'ny asany izy tamin'ny faha-16 taonany ary lasa nalaza be izy ankehitriny ka fantatry ny rehetra. Nahazo 6 American Music Awards, Grammy 7 ary 18 Billboard Music Awards izy hatramin'izao. Nanangana ny marika hatsarany aza izy Fenty Beauty .
Madonna dia iray amin'ireo kintana folo be mpitia indrindra ao amin'ilay lisitra. Azo antoka fa 50 taona izy izao. Saingy, mbola manohy mampitolagaga antsika rehetra amin'ny feony tsara izy. Ankoatra ny mihira dia manoratra ny hirany mihitsy aza izy. Manana orinasa mihitsy aza izy izao.
Ka i Taylor Swift dia mpihira pop iray hafa mahomby sy malaza izay nanome antsika hira maro toy ny Love Story, You Belong with Me, ary maro hafa. Ankoatry ny mihira, dia manoratra am-peo sy mihetsika aza izy. Ny rakikirany mozika koa no rakikira be mpividy indrindra eran'izao tontolo izao. Nahazo Grammy 4 aza izy.
Netflix vs Amazon Prime Video - Ny fampitahana faratampony
Lady Gaga dia mpamorona sy mpamokatra, DJ ary mpihira. Tena kintana rock tokoa izy. Izy dia tsy mitovy amin'ny hafa izay mahatonga azy ho miavaka. Mahagaga mihitsy aza izy amin'ny filalaovana.
Selena Gomez dia mpilalao sarimihetsika ary koa mpihira manan-talenta. Isika rehetra dia samy mahalala azy hatramin'ny andron'ny Mpimasy ao amin'ny Waverly Place. Ny hirany malaza dia nahatonga ny mpijery rehetra ho mpankafy eran-tany. Izy aza dia ny Goodwill Ambasadaoron'ny UNICEF .
Shakira dia tsy vitan'ny hoe malaza noho ny mozikany, fa koa ny dihy vavony mahavariana. Manomboka amin'ny tanora ka hatramin'ny olon-dehibe dia adala daholo ny mijery azy mandihy. Izy dia hatsaran-tarehy Kolombiana ary mpialamboly tanteraka izy ary azo antoka fa fantany ny fotoana hanaovana fampisehoana mitaona olona. Ankoatr'izay dia ampiarahina amin'ny asa fiantrana mihitsy izy ary mandamina hetsika maro toy izany ho an'ny sahirana indraindray.
Katy Perry dia iray amin'ireo kintana amerikana tsara indrindra. Mpilalao sarimihetsika, mpamoron-kira ary mpihira izy. Izy aza dia masoivohon'ny Firenena Mikambana Mankasitraka. Ilay hirany hoe I Kissed a Girl dia nampalaza azy nandritra ny alina. Nanomboka tamin'izay dia tena nahavoa ny hirany rehetra.
Adele dia mpihira anglisy ary mpamoron-kira izay fanta-daza amin'ny feony mahatalanjona. Izy no nanao ny rakikirany voalohany tamin'ny faha-19 taonany ary lasa malaza be izany. Izy io no nahatonga ny mpankafy azy ho tia ny hirany. Nahazo Grammy 2 sy loka maro hafa aza izy tamin'ny hirany.
Beyonce dia mpihira R'n'B ary mpandihy mahay be koa. Nampiala-voly anay nandritra ny taona maro izy. Ny sasany amin'ireo hirany malaza dia Crazy In Love, Beautiful Liar, Single Ladies, Irreplaceable ary Baby Boy. Tokony ho tamin'ny taona 2019 dia nandefa sary mihetsika izy izay nanasongadina ny zava-bitany tao Coachella.
Jennifer Lopez dia vehivavy manana talenta marobe, izay nanaporofo ny tenany tamin'ny filalaovana sy ny fihirana. Tsy izany ihany fa mpandihy mahay sy mpanao fampisehoana koa izy. Izy aza dia manana ny orinasany mahomby.
Fantatrao ve izay heverina ho vehivavy tsara tarehy indrindra eto an-tany? Eny, izany no Angelina Jolie. Vehivavy manan-talenta izy. Tsy mpilalao sarimihetsika mahatalanjona fotsiny izy fa reny be reny koa. Eny, izy aza dia masoivohon'ny Firenena Mikambana. Angelina Jolie koa dia nanaporofo ny tenany tamin'ny famolavolana modely, ny fanoratana ny sarimihetsika sarimihetsika, ny fitarihana ny tantara.
Paris Hilton dia maodely ambony indrindra ary mpilalao sarimihetsika. Efa ela no nahalala azy isika rehetra. Izy koa dia mpandova ny Dynasty Hilton manontolo. Nanomboka nalaza izy taorian'ny nandraisany anjara tamin'ny fandaharana tena izy antsoina hoe Ny Fiainana Tsotra tamin'ny taona 2000 tany ho any. Tena sosialy malaza eran'izao tontolo izao izy.
Demi Lovato dia olona mahatalanjona ary tsara tarehy ihany koa. Manana feo nomen'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana izy izay nahatonga ny mpankafy azy ho adala ho azy. Izy dia iray amin'ireo mpihira manan-talenta indrindra. Ankoatra ny fihirana dia nanandrana nanao fihetsika ihany koa izy ary anisan'ny lisitr'ireo sarimihetsika lava. Namoaka rakikira 6 teo ho eo izy mandraka ankehitriny amin'ny asany mihira.
Vehivavy manan-talenta i Nicki Minaj. Nahay ny kanto manao rap izy. Eny, eo am-panoratana hira sy fanaovana fihetsika aza izy. Nanome azy fitsangatsangana ny asany tamin'ny taona 2009 tany ho any ary nanomboka teo dia tsy tokony hitodika any aoriana intsony izy. Ny sasany amin'ireo hirany malaza dia Playtime Is Over, Beam Me Up Scotty. Ny iray amin'ireo rakikirany fantatra amin'ny anarana hoe Pink Friday dia nanetsika ny indostrian'ny mozika iray manontolo.
Kim Kardashian na Kimberly Kardashian dia fantatra fa iray amin'ireo rahavavy malaza indrindra amin'ny fianakaviana Kardashian / Jenner. Nahazo ny lazany avy amin'ny maha kintana fampisehoana zava-misy izy ary ankehitriny izy no mpilalao fototra amin'ny fampisehoana zava-misy izay antsoina hoe Keeping Up with the Kardashians. Nanangana ny akanjony sy ny bizina hatsaran-tarehy mihitsy aza izy.
Iza no tsy mahatadidy an'i Hana Montana? Fantatray i Miley Cyrus tamin'ny andron'i Hannah Montana ary izany no izy, mpihira mamiratra. Ny ankamaroan'ny fotoana dia teo amin'ny vaovao foana izy noho ny fahatsapany fitafiana sy ny fomba fiainany tsy manam-paharoa.
Samy mankafy an'i Megan Fox avokoa na ny lahy na ny vavy. Tena malaza izy noho ny fijery mahavariana sy ny masony manga. Modely amerikana izy ary mpilalao sarimihetsika izay nanjary nalaza tamin'ny maha-ampahany azy tamin'ny sarimihetsika tena lehibe toa an'i Jennifer's Body, The Transformers, Teenage Mutant Ninja Turtles, ary Zeroville.
Mariah Carey dia iray amin'ireo mpihira tsara indrindra fantatsika. Tsy nahomby mihitsy ny feony nampiaiky volana azy. Voadona avokoa ny hirany izay lalaovinao. Vehivavy manan-talenta sy tsara tarehy izy.
Christina Aguilera dia mpihira mahafinaritra sy mahomby ihany. Nalaza indrindra tamin'ny taona 90 sy 20 izy, saingy ankafizin'ny mpankafy azy ankehitriny. Tsara loatra ny feony. Nahazo mari-pankasitrahana Grammy 6 aza izy izay mampiseho fa mpihira mahafinaritra izy. Izy aza dia masoivohon'ny Firenena Mikambana.
Avril Lavigne dia nanome hira hira malaza be tsy hita isa nandritra ny andro voalohany. Amin'izao fotoana izao dia tsy mitondra ny asany mihira intsony izy, fa ny mpankafy azy kosa mbola tia mihaino ny hirany taloha. Nisy fotoana nahafantarana azy ho iray amin'ireo mpihira nahomby indrindra. Ny sasany amin'ireo hirany malaza indrindra dia ny My Happy Ending, Girlfriend When You Gone, and Nobody's Home.
Kylie Jenner dia zandrin'i Kim Kardashian zandriny izay tian'ireo mpanatrika rehetra manerantany. Izy dia fantatra ho iray amin'ireo tapitrisa tapitrisa indrindra eran'izao tontolo izao. Nahazo laza bebe kokoa izy raha vao nanomboka ny marika hatsarany antsoina hoe Kylie Cosmetics izay lasa nahomby tokoa.
Gigi Hadid dia malaza amin'ny maodely Victoria Secret. Tonga teo amin'ny sehatry ny famirapiratany izy rehefa nifandray tamin'i Zayn Malik, izay iray amin'ny One Direction. Gigi Hadid dia vehivavy tsara bika. Fantatra fa izy no iray amin'ireo maodely ambony indrindra amin'ny indostria.
Scarlet Johansson dia manana fahaiza-manao mahavariana. Zara raha hisy olona tsy mahalala azy. Nomeny ny zava-bitany tsara indrindra tamin'ny sarimihetsika niasany rehetra. Nanao sarimihetsika mamiratra maro izy. Izy koa dia anisan'ny sarimihetsika Marvel tao Avengers izay nitondrany ny anjara asan'ny Black Widow. Fantatra fa iray amin'ireo mpilalao sarimihetsika marobe indrindra izy izay hitan'izao tontolo izao hatramin'izao.
Kristen Stewart dia nitana ny andraikitr'i Bella, nalaza izy taorian'ny nisehoany ho mpitarika ny andiany Twilight Saga. Aorian'izany dia tsy mila mijery any aoriana intsony izy. Izy no nitana ny laharana voalohany tamin'ny sarimihetsika maro ary izy koa dia endrik'i Coco Chanel. Ny zavatra tsara indrindra momba azy dia ny fahitany azy irery. Mpilalao sarimihetsika miasa mafy izy ary tian'ireo mpankafy azy.
Alicia Keys dia mpihira amerikanina. Izy dia miditra amin'ny endrika maro isan-karazany izay ahitana ny R & B, neo-fanahy ary vitsivitsy hafa. Izy dia manana nahazo loka 15 Grammy . Noho izany, azonao atao ny maminavina ny fahaizany manan-talenta. Mpikambana tao amin'ilay seho fihirana The Voice US aza izy izay mpitsara.
Lindsay Lohan dia mpilalao amerikana ary modely koa. Fantatry ny rehetra tsara izy. Ankoatry ny fihetsika sy ny fanaovana maodely dia mihira aza izy. Misy ny sasany amin'ireo fampisehoana nataony amin'ny sarimihetsika malaza toa ny Just My Luck, The Parent Trap. Izy aza dia ampahany tamin'ny Herbie: Loaded Load, The Holaday, Freaky Friday, sns.
Stacy Ann Ferguson na fanta-daza amin'ny anarana hoe Fergie dia mpihira malaza izay nanjary nalaza taorian'ny nahatongavany ho anisan'ny tarika iray izay fantatra amin'ny anarana hoe The Black Eyed Peas. Ankoatr'izay, dia mpanafika aza izy tamin'ny taona 2000.
Jessica Alba dia mpilalao amerikana modely amerikana nanjary nalaza be taorian'ny andraikiny tao amin'ilay andian-tantara Dark Angel. Ny fahaizany mihetsika tsara dia nahatonga azy ho tian'ny mpijery avy hatrany. Izy aza dia efa niasa tamina sarimihetsika maro hafa toa ny Mifohaza, Fantastic Four, ary maro hafa.
Kate Middleton dia iray amin'ireo mpikambana ao amin'ny fianakavian'ny mpanjaka any Britain. Izy no vadin'i Prince William , iza no Duke of Cambridge.
Jennifer Lawrence dia tsy tsara tarehy fotsiny, fa izy koa dia mpilalao sarimihetsika mahatalanjona. Nahavita sarimihetsika marobe toa ny X-men, Neny ary ny maro hafa izy. Vao feno 30 taona i Jennifer Lawrence ary efa nahavita be tamin'ny asany sy ny fiainany izy.
Jessica Simpson dia mpilalao amerikana mpihira amerikana iray hafa izay tian'ireo mpankafy azy rehetra. Nanangana ny tenany ho olo-malaza manodidina ny taona 1999 taorian'ny namoahana ny rakikirany voalohany Sweet Kisses.
Jenifer Aniston dia malaza amin'ny anjara asany amin'ny Rachel amin'ny seho Friends . Raha efa nijery ilay seho ry namana dia azo antoka fa ho fantatrao izy. Tamin'ny alàlan'ny filalaovana ny toeran'i Rachel dia nahazo fankatoavana iraisam-pirenena izy ary koa laza. Nahazo loka maro aza izy noho ny asany. Ankoatry ny fihetsika dia tafiditra ao anatin'ny fanomezana sy asa soa koa izy.
Azonao atao ny milaza fa Halle Berry dia iray amin'ireo mpilalao sarimihetsika Hollywood tsara indrindra sy ambony. Nahazo Oscar mihitsy aza izy tamin'ny fampisehoana nataony.
Kesha dia mpanoratra ny hira amerikanina, mpihira pop ary mpanao rap. Izy no nanao ny rakikirany voalohany tamin'ny taona 2010 teo ary nanaporofo fa mendrika manerantany izy.
Hilary Duff dia mpihira malaza ary mpilalao sarimihetsika izay niseho voalohany tamin'ny andiany Disney fantatra amin'ny anarana hoe Lizzy McGuire. Izy koa dia efa ampahany tamin'ny andian-tantara Gossip Girl, A Cinderella Story, sy ny maro hafa.
Vadin'i Barack Obama, izay fantatra fa filoham-pirenena amerikanina faha-44 any Etazonia. Ankoatr'izay, i Michelle Obama dia mpisolovava tsara mihitsy. Niasa tamina mpisolovava ny fanentanana ny fahantrana, ny fanabeazana ary ny fampihetseham-batana izy.
Ellie Goulding dia mpihira mozika pop manan-talenta. Tian'ny mpankafy azy daholo ny hirany ary malaza foana.
Hilary Clinton dia mpanao politika malaza any Etazonia. Mpikambana ao amin'ny Antoko Demokratika aza izy, ny andriambavilanin'i Arkansas. Tokony ho tamin'ny taona 2016 dia voafidy ho kandidà ho filoham-pirenena ny antoko Demokratika.
Vanessa Hudgens dia mpihira ary koa mpilalao sarimihetsika iray izay nanjary nalaza tamin'ny anjara asany tao amin'ny High School Musical niaraka tamin'i Zac Efron. Taorian'izay dia nanohy ny asany tamin'ny mozika izy.
Jessie J dia mpihira pop malaza. Ny sasany amin'ireo hirany malaza indrindra dia ny Laser Light, Iza Ianao, ary ny vidin'ny tag.
Priyanka Chopra dia mpilalao sarimihetsika Bollywood izay nahazo laza bebe kokoa taorian'ny nisehoany tamin'ny andiany Hollywood Quantico. Izy aza dia nitana ny anjara asany ratsy tao Baywatch. Izy dia manambady an'i Hollywood Singer Nick Jonas.
Emma Watson dia mpilalao sarimihetsika malaza iray izay malaza indrindra amin'ny andraikiny amin'ny maha Hermione Granger azy, ao amin'ny andiany Harry Potter. Izy aza dia masoivohon'ny Firenena Mikambana Mankasitraka.
Kate Moss dia fantatra ho iray amin'ireo supermodel ambony. Tian'ny mpankafy azy izy noho ny endriny tonga lafatra.
Kylie Minogue dia mpilalao sarimihetsika aostralianina ary mpihira koa. Nanjary nalaza tamin'ny taona 1990 izy ary avy eo nahatratra ny tampon'ny asa fihiràny tamin'ny taona 2000.
Heidi Klum dia mpampiantrano ary koa mpilalao sarimihetsika malaza. Izy aza no mpandray ilay fandaharana amin'ny fahitalavitra: America's Got Talent izay nampalaza azy bebe kokoa.
Kate Winslet dia mpilalao sarimihetsika Hollywood izay malaza amin'ny anjara asany amin'ny sarimihetsika malaza Titanic. Niseho tamin'ny sarimihetsika mahatalanjona hafa koa izy.
Ka eto isika dia manana mpilalao sarimihetsika tsara tarehy indrindra, mpampiantrano amin'ny fahitalavitra, mpihira malaza indrindra, mpanao asa soa ary koa mpikatroka mafàna fo. Ireo rehetra ireo dia toetra samy hafa samy hafa izay avy amin'ny fiaviana sy fiaviana samihafa. Saingy, ny zavatra iray mahazatra azy ireo dia ny hoe miasa mafy izy ireo. Ny vehivavy rehetra ato amin'ity lisitra ity dia nandalo fiakarana na fidinana tamin'ny fiainany manokana hahazoana fahombiazana, harena ary fanekena.
Ny sasany tamin'izy ireo dia teraka tamina fianakaviana manankarena ary ny hafa kosa tsy maintsy niasa mafy mba hahomby. Na izany aza, ny vehivavy rehetra dia mendrika ny hanaja sy ho tian'ny mpijery noho ny asa mafy sy ny fanoloran-tena.
Jake Gyllenhaal Sarimihetsika sy fandaharana amin'ny fahitalavitra
Sarimihetsika Tom Sturridge sy fandaharana amin'ny fahitalavitra
Among Us VR - Izay rehetra fantatsika hatreto
Hopitaly Ady - Tonga amin'ny Nintendo Switch ve izany?
lalao roblox tsara indrindra nilalao
mijery sarimihetsika miaraka amin'ny bitro an-tserasera
tranokala fampisehoana sarimihetsika sy fahitalavitra
mahazo hulu maimaim-poana ve aho amin'ny spotify
aiza ny fo dia putlocker